बैंक मर्जरः नेपाल बैंक ताक्दै सिभिल र नविल मर्ज होलान् एभरेष्ट र एसबीआई ?
शिव सत्याल काठमाडौं, २९ असार
१२ असारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई होटल याक एण्ड यतिमा बोलायो । र, राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउन चाहेकोले १५ दिनभित्रमा मर्जरको प्रतिवद्धतासहित राष्ट्र बैंकमा विवरण बुझाउन निर्देशन दियो ।
एक्कासी आएको यस्तो निर्देशनले बैंकर्स छक्क परे । १५ दिनमा कसरी, कोसँग, कस्तो मर्ज गर्ने भन्ने अन्योल भयो । र, त्यहीं एउटा मजाक चल्यो– १ नम्बर बैंकले २८औं नम्बरको बैंकसँग, २ नम्बरको बैंकले २७ नम्बरको बैंकसँग मर्जर गर्ने भन्ने । यो नम्बरको तय बैंक संचालनमा आएको मितिका आधारमा तय गरिएको थियो ।
यो मजाकलाई सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले गम्भीरतापूर्वक लिए । र, नेपाल बैंकका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारीसँग मर्जरको अनौपचारिक प्रस्ताव नै राखे । संचालन मितिका आधारमा नेपाल बैंक १ नम्बरको बैंक हो भने सिभिल बैंक २८औं नम्बरको ।
तामाङको प्रस्तावलाई अधिकारीले मजाककै रुपमा लिए । र, भने– भै हाल्छ नि ! १५ दिनमा प्रस्ताव बुझाउनु भनेको छ, यो छोटो समयमा अरु त के हेर्न भ्याइएला र, नम्बरकै आधारमा मर्ज गर्ने त होला नि !
नेपाल बैंकका अध्यक्ष अधिकारीले मजाकै रुपमा यस्तो बताएका थिए । तर, सिभिल बैंकका अध्यक्ष तामाङले मजाक गरेका थिएनन् ।
‘१५ दिनमा प्रस्ताव बुझाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु तनावमा थिए, यस्तै तनावको बीच नम्बरका आधारमा मर्ज गर्ने भन्ने मजाक गरिएको थियो, मजाककै रुपमा हाम्रा अध्यक्षले पनि सिभिल बैंकका अध्यक्षको प्रस्तावलाई भै हाल्छ नि भनेर जवाफ दिनुभएको थियो, तर सिभिलले ‘फलोअप’ गरिरहेको छ,’ अध्यक्ष अधिकारीसँगै रहेका नेपाल बैंकका एक पदाधिकारीले शिलापत्रसँग भने ।
सिभिल बैंक मात्रै होइन, सेन्चुरी बैंक पनि नेपाल बैंकसँग मर्जरको पहलमा छ । पछिल्लो समयमा खुलेका मेगा, सेन्चुरी, सिभिल र जनता बैंक राम्रो बैंकसँगको मर्जर प्रयासमा छन् । यसमध्ये जनता बैंकले र ग्लोबलआइएमइ बैंकसँग मर्जरको लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।
‘सबैभन्दा पूरानो र सरकारी लगानी पनि भएकोले नयाँ बैंकले नेपाल बैंकसँग मर्ज गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनसुभा राखेका छन्, नेपाल बैंकसँग सम्पत्ति पनि धेरै छ, यसैले धेरैको आँखा परेको हुन सक्छ,’ नेपाल बैंक स्रोतले भन्यो ।
पछिल्लो समय नविल बैंकले पनि नेपाल बैंकसँग मर्जरको प्रस्ताव राखेको स्रोतले वतायो । नेपाल बैंकमा सरकारी लगानी पनि भएकोले उसँगको सम्पत्ति तथा विश्वसनीयताप्रति धेरै बैंकको नजर परेको छ ।
‘नयाँ बैंकले प्रस्ताव राख्दा हामीले खासै ध्यान दिएका छैनौं, नविल बैंकले पनि प्रस्ताव गरेपछि यसको लागि हामीसँगभन्दा पनि सरकारसँग कुरा गर्नुस् भनेर जवाफ दिएका छौं, अर्थमन्त्रालयले हुन्छ भन्यो भने हामीले हुन्न भनेर हुदैन, उसले हुदैन भन्यो भने हामीले हुन्छ भनेपनि हुने होइन, त्यसैले अर्थमन्त्रालयसँग कुरा गर्नुस् भनेका हौं,’ नेपाल बैंक स्रोतले भन्यो ।
मर्ज होलान् एभरेष्ट र एसबीआई ?
प्रमोटरबीच कुनै प्रकारको साइनो–सम्बन्ध जोडिने बैंकहरु मर्ज गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशात्मक सहजीकरण गरिरहेको छ । भारतीय बैंकको लगानी रहेका एभरेष्ट र नेपाल एसबीआई बैंक मर्ज गर्न सकिन्छ कि भन्ने पहल पनि राष्ट्र बैंकको छ ।
नेपाल एसबीआई बैंकमा भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डियाको ५५ प्रतिशत सेयर छ । यस्तै, एभरेष्ट बैंकमा भारतकै पञ्जाब नेसनल बैंकको २० प्रतिशत सेयर छ । यसैकारण भारतीय बैंकको सेयर भएका दुबै बैंक मर्ज गर्न सकिन्छ कि भन्ने पहल गरिएको हो ।
तर, दुबै बैंक स्रोत भने ‘सम्भव नरहेको’ प्रतिक्रिया दिन्छ । एसबीआई र एभरेष्ट बैंकको व्यवस्थापन तहका अधिकारी यी दुबै बैंक मर्ज हुने वा लगानी थप गर्ने विषय तत्कालको लागि सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन् ।
‘पहिलो कुरा त आरबीआई (भारतको केन्द्रीय बैंक–रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया) ले दिदैन, हाम्रा प्रमोटर बैंक (स्टेट बैंक अफ इन्डिया र पञ्जाब नेसनल बैंक) आफैमा प्रतिस्पर्धी बैंक हुन्, त्यसैले भारतका बैंकको लगानी भएको आधारमा एभरेष्ट र एसबीआई बैंक मर्ज हुन्छन् भन्ने अनुमान सही होइन,’ दुबै बैंक स्रोतको एउटै आशयको प्रतिक्रिया छ ।
अर्थमन्त्रीलाई ‘खुसी पार्न’ ग्लोबल र जनता मर्ज !
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवि नेपाल मर्जरबाट बैंकको संख्या घटाउन लागिपरेका छन् । तर, बजेटमा बैंक मर्जरलाई प्रोत्साहन मिल्ने नयाँ कुनै कार्यक्रम आएको छैन । म्याद सकिन लागेको विगतको सुविधालाई निरन्तरता मात्रै दिइएको छ ।
गभर्नर डा. नेपालले २७ असारमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, अर्थसचिव डा. राजन खनाल देश बाहिर छन् । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति साउन दोस्रो साता मात्रै आउने भएको छ ।
गभर्नर डा. नेपालले सार्वजनिक रुपमा तोकेको मितिमा मौद्रिक नीति आउने सम्भावना किन रहेन ? मर्जरबाट बैंकको संख्या घटाउने राष्ट्र बैंकको नीतिप्रति अर्थमन्त्रालयको असहमति त होइन ? यस्ता प्रश्न पनि उब्जिएका छन् ।
हुन त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि सार्वजनिक मन्चहरुबाटै बैंकको संख्या बढी भएको भन्ने गरेका छन् । तर, बैंकको संख्या घटाउने राष्ट्र बैंकको प्रक्रियाप्रति अर्थमन्त्रालयको ‘रिजर्भेसन’ रहे जस्तो घटनाक्रमले देखाएको छ ।
‘२७ असारमा मौद्रिक नीति आउँछ भनेर गभर्नर सावले भन्नुभएको तपाइहरुले पनि सुन्नुभएकै हो, त्यो बेलामा अर्थसचिव नेपालमा हुनुहुन्न भन्ने पनि गभर्नरज्यूलाई थाहा रहेनछ, बैंकको संख्या घटाउने विषयमा अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच कति समन्वय भएको छ भनेर यही घटनाबाट पनि हेर्न सकिदैन र !’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
मर्ज गरेर बाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको केही दिनपछि नै ग्लोबल आइएमइ बैंक र जनता बैंकबीच मर्जरका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो । यो मर्जरलाई धेरैले ‘अर्थमन्त्रीको चाहनामा भएको मर्ज’को संज्ञा दिए ।
ग्लोबल र जनताको मर्जर अर्थमन्त्रीको चाहनामा भएको भनेर व्याख्या गरिनुका पछाडि कारण छ । जनता बैंकमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाका छोरा काम गर्छन् । यस्तै, जनता बैंकमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको सेयर लगानी पनि रहेको बताइन्छ । डा. खतिवडा गभर्नर भएकै बेलामा जनता बैंकलाई लाइसेन्स दिइएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडा निकट स्रोत भने यो मर्जरमा अर्थमन्त्रीको चाहना नरहेको दाबी गर्छ ।
‘अर्थमन्त्रीलाई खुसी पार्न मात्रै जनता र ग्लोबल मर्ज गरिएको हो, उहाँको व्यक्तिगत चाहना हो जस्तो लाग्दैन,’ अर्थमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।
२२ बैंकको प्रतिवद्धता, चार्टर्डको कुटनीतिक भाषा
राष्ट्र बैंकले मर्जरको प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिएपछि २२ वटा बैंकले मर्जरको प्रतिवद्धतापत्र पेश गरेका छन् । बैंकहरुले मर्जरको प्रतिवद्धता पेश गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले जानकारी दिए ।
निरौलाका अनुसार एनएमबी, सनराइज, लक्ष्मी, एनसीसी, सानिमा, सिभिल, माछापुच्छ्रे, सेन्चुरी र नेपाल एसबीआइ बैंकले मर्जरमा जाने प्रतिवद्धता पेश गरेका छन् । यस्तै ग्लोबल आइएमइ बैंक र जनता बैंकबीच मर्जरको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । सिटिजन्स बैंकले सहयोगी विकास बैंकसँग मर्जर गर्ने भएको छ ।
प्रतिवद्धता पेश गर्ने अन्य बैंकहरुमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एनआइसी एसिया, हिमालयन, कुमारी, मेगा, सिद्धार्थ, प्रभु र बैंक अफ काठमाडू छन् ।
नेपाल बंगलादेश बैंकले बंगलादेशको आइएफआइसी बैंकसँग थप छलफल गर्नुपर्ने भनेर पत्र पठाएको छ । बंगलादेश बैंकमा आइएफआइसी बैंकको प्रमुख लगानी छ ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले भने कुटनीतिक भाषा प्रयोग गरेको छ । उसले मर्जर र एक्वीजीसनलाई सहयोग गर्ने पनि भनेको छ भने ‘आफ्नो रणनीतिप्रति अडिग रहने’ पनि उल्लेख गरेको छ ।
‘मूल रणनीतिमा अडिग रहदै बैंकिङ क्षेत्रको सम्भावित मर्जर र एक्वीजीसनलाई सहयोग गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छाैं,’ चार्टर्डले राष्ट्र बैंकमा बुझाएको पत्रमा लेखिएको छ ।
बिग मर्जरः बिग तयारी कि स्वार्थपूर्तिको बिग ड्रिम ?
बिग मर्जरका पछाडि सन्देह रह्यो
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ३०, २०७६, ०५:३०:००